म अनि भ्रष्टाचारको छानो
Nepal Online Patrika विचार म अनि भ्रष्टाचारको छानो
हरेक परिवारको मातापितालाई आफ्ना सन्तान खुब प्यारो लाग्दछ। म पनि प्यारो नै थियं। जब म सानो थिंए। आमाले मलाई खुब माया गर्नुहुन्थ्यो। जब म रुने गर्दथें।आमाले मलाई मिठी दिन्छु बाबू नरोउ भन्नू हुन्थ्यो। म मिठिको आशामा रुन बन्द गर्दथें।घरमा यदि कोहि पाहुना आए भने ती पाहुनालाई मनोरञ्जनको साधनको रुपमा पनि म प्रयोग हुने गर्दथें।
आमा बुबा पाहुनाहरु संग यसो भन्नुहुन्थ्यो “हाम्रो छोरो कति राम्रो नाच्दछ। नाच छोरा नाच अंकललाई तिम्रो नाच नाचेर देखाईदेउ।” म लजाउथें।नाच्न नजान्ने म लाज लाग्नु स्वभाविक हो । फेरि बुबाले भन्नूहुन्थ्यो म दुई रुपैयाँ दिन्छु छोरा नाच।ओहो अबत केही पाउने भइयो। म त्यो दुई रुपैयाँको आशा लिएर जानीनजानी नाचिदिन्थें।
अलि ठूलो भएं आमाबाबाले भन्नू भयो यो बर्ष पढाईमा प्रथम भए घडी किनिदिन्छु। मैले त्यही घडिको आशामा पढाई गर्दथें।म हिंड्ने आशै आशको गोरेटो थियो। यस्तै संस्कार बाट म ठूलो भएं।पढाइ सकें।
पढाइ सके पछि एक दिन म जागिरे भएं।जागिरमा पनि अब मलाई हरेक कुरामा अरुबाट आशा,अपेक्षा हुन थालिसकेको थियो। मैले अरु बाट केही नलिइ उस्को काम गर्न नसक्ने आदत बसिसकेको थियो। मलाई नानी देखिको बानीले लोभ र आशामा परिणत गराएको थियो। मैले जागिरको दौरान त्यसरिनै पैसा कमाउन सुरु गरें।
पहिला त हाम्रो घर पनी जंगलको साटा,भाटा नै तेर्साएर,खरले छाएको बुकुरो थियो। माटाकै चुलो थियो। पछि पैसा कमाएं मैले ठूलो घर शहरमा बनाएं। यति परिवर्तन आउदा सम्म आमा बुबाले मलाई एक आखर सोध्नु भएन “बाबू तेरो जागिरको कमाइले यत्रो गर्न सक्ने हैसियत त छैन।कहाँ बाट यो कमाई गरेको छ्स” भनेर ।
भ्रष्टाचार के श्री ३ मोहन सम्शेर जबराले हस्तान्तरण गरेका होलान? भ्रष्टाचार के बिश्वेश्वर प्रशाद कोइरालाले जन्माएका होलान? त्यसोभए भ्रस्टाचार के किसुनजिले जन्माएका होलान त ?
भ्रष्टाचार कि पुष्पलालले जन्माएका होलान त?
कि रास्ट्रले जन्माएको हो? कि समाजले जन्माएको हो भ्रष्टाचार ? अंह यी माथिका कसैले पनि हैन। हरेेेक ब्यक्ति हाम्रा लागि सम्माननिय छन।
भ्रष्टाचार त हाम्रा आमा बाबाले हाम्रा घरमा जन्माएका हुन।हाम्रा अभिभावकले जन्माएका हुन। (सबै अभिभावकलाई भनिएको छैन)
हेर्नुहोस न के संसारमा भएका विकसित देशहरुमा भ्रष्टाचार भएका छैनन र?
कति कति शक्तिशाली बिकसित रास्ट्रमा पनि भ्रस्टाचार भएका छ्न।ती देशहरूले पनि कानुन त बलियो बनाएका छन नि। तर पुर्णरुपमा यस्को पालना हुन सकेको छैन। किनकी कानुनले यस्को निवारण गर्न सकेको देखिएको छैन।
यस्को निवारण त केबल हरेक घरबाट मात्र सम्भव हुने छ। केबल अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिएर मात्र यस्को अन्त्य हुने छ।
हामी अभिभावकले हाम्रा छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन सकेमा मात्र भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्न सकिने छ।
हाम्रो नेपालको हरेक छोराछोरीको बिचारधारा भ्रष्ट नहोस। भ्रष्टाचार को मुहान घर र अभिभावक नै भएकोले हामी स्वयं सजगता अपनाउन सकौं। हाम्रा नेपालका छोराछोरीलाई कालो धनले उनिहरुको गोजि भर्न नपरोस।हाम्रो नेपाल र नेपाली साराको इज्जत,इमानले सगरमाथा चुमोस।हाम्रो देश नेपालमा शान्ती,समृद्धि आओस।
बिदेशमा हुनुभएको सम्पुर्णलाई स्वदेस बोलाएर वहांहरुको आफ्नो योग्यता र क्षमताको आधारमा स्थान दिएर देश बिकास गर्न आव्हान गरिएको होस। अबको हाम्रो नेपालको पुस्ता कोहि बिदेसिनु नपरोस। हामी साराको कल्याण होस।
जापानको उपनिवेश कोरिया र स्वतन्त्रताको संघर्ष।
हाम्रो देश नेपालको नेपाली कोहि पनि बिदेसिनु नपरोस
अन्जली अधिकारी बिहे गर्दै, काे सँग गर्दै छिन् त ? हेर्नुहाेस् भिडियाेमा